Uma uthi nhlá, kubonakala sengathi izinto kukhethwa izipho - ilula ngokwanele. Noma kunjalo, abaningi kithi ngosuku olwandulela iholide ngezikhathi ezithile udaba emkhathaza: ngokuthi ungayinika umngane? Ngale nje kwalokho, lokhu akuphathelene nje umuntu omaziyo, kodwa ethembekile, enokwethenjelwa futhi ababewazi. Ngakho-ke, isipho kufanele kube i-wakhe yinto emnandi ababengayilindele.
Ngemva kokucabangisisa ngalokho ongasinika umngane.
Uma umngane wakho ngokwemvelo uyinkosikazi, wayelithanda ukupheka, sika, beading, efekethisiwe noma ubhuquze amathoyizi, isipho kakhulu ukuba abe kuyoba into elikuvumela ukuba alenze umdlalo ezithakazelisayo. Kungaba incwadi, isigaba master ukuthuthukisa amakhono ngesikhathi uchwepheshe noma iyiphi into elisetshenziswa umdlalo (ezingavamile imbewu, ubuhlalu, amabhodwe, uvolo, izitsha), kanye service, kukhethwa pillows, ngengubo napkins, isikhunta bayobhaka noma panel.
Uyokwanelisa isifiso sabo noma iyiphi intombazane - sibe bahle. Yini upha umngane ukuthi ubuhle bakhe wahlala ngabanye egqamile futhi eyingqayizivele? Londvolota elikhangayo zemvelo zokwelapha spa kuzosiza. Ngakho-ke, njengesipho, ungakwazi ukwethula ithikithi salon ubuhle. Pedicure, manicure, sauna, massage, umzimba ukugoqa - lezi izinqubo ngeke abashiye noma iyiphi owesifazane ngabandayo.
Kuleso simo, uma intombi yakho - yothando imvelo esitolo, isipho kakhulu ukuba abe kuyoba izinto ezithambile nalokho okubizwa ngokuthi "amagajethi" (amathoyizi, imicamelo, izinto eziyizikhumbuzo njll).
Yini upha umngane - umthandi emidlalweni eyingozi? Le ntombazane ngokuqinisekile uthanda adventure oyinhloko. Ungaya Ukushushuluza noma i-snowboarding elinezintaba, ukugibela, ukugibela emfuleni entabeni noma iya okuzingela kwamanzi. Ngokuvamile, noma yini oyithandayo!
Uma ufuna kusimangaze umngane wakho, kodwa namanje abazi yini ukunikeza umngane wakhe ku-DR, ungalilahli ithemba. Kukhunjulwa sosuku lokuzalwa kungenzeka indiza phezu komuzi endaweni ibhaluni noma lingukuhlonipha zezimvemvane.
Intombi-fashionista bayakwazisa ubucwebe amahle (namasongo, namacici, imihlobiso elengayo), amaduku wesibeletho, esikhwameni, esikhwameni, njll stylish Hhayi engadingekile futhi kungaba imfashini ihembe iqoqo umklami ozithandayo.
Uma umngane wakho uthanda ukufunda, ungakwazi mnikeni encwadini novelties izincwadi, kodwa ngaso sonke isikhathi khumbula ozithandayo uhlobo intombi yakho. Lady, nentshisekelo umculo, njengezipho awaphelele ephelele akwazi ukugcina collectible ngomculo zezithombe noma zabuna.
Ngaphezu kwalokho, umngane anganikeza okuthiwa "izipho kwesizini." Ngokwesibonelo, uma umngane wakho esikhathini esizayo esiseduze uya ukuphumula, ngokuqinisekile kuyokwehlela Ukugunda lo muthi izimonyo isikhumba nezinwele, isigqoko, ihembe, sarongs njll
Yeka ukuthi yaba isipho ukunikeza umngane, uma kungowesifazane ibhizinisi? Ibhizinisi owesifazane kungenziwa eyethulwe njengesipho umhleli zikanokusho enhle, ngepeni ezibizayo noma isikhwama esiphathwa ngesandla nenhle. Lezi sekeli hhayi kuphela abangela ukutuswa osebenza nabo, kodwa futhi ukuba sikhulise isimo salo.
Futhi manje amathiphu ambalwa ngalokho ukuba ningayeki amantombazane.
Akunakusetshenziswa musa ukwethula intombi yakho njengomuntu samanje "umnotho" izinto, ikakhulukazi uma enza lokho Awuzange uwucele.
Akubalulekile ukunikeza imikhiqizo yezimonyo, ikakhulukazi yakhelwe ukuxazulula izinkinga ezithile. Lesi sipho kungaba for girls nishaye kuye ukuzethemba kanye nendlela awaphumeleli ekutshaleni ukungabaza ngokuthi ukukhanga yayo.
It is hhayi Kunconywa ukunikeza umngane kwezingubo zangaphansi. Ake lolu hlobo izipho kuyoba ilungelo yomyeni wakhe. Futhi nje, awazi kwanoma iyiphi okuthandwa noma izintandokazi abangane bakho, futhi nakakhulu lingakanani.
Nanka amanye amathiphu elandelayo lapho uzokwazi ukwenza lula inqubo yokukhetha isipho kuwe. Unquma ukuzisebenzisa noma cha, into esemqoka ukuthi wethulwa ukumangala wenziwe umphefumulo, imfudumalo Nginifisela okuhle.
Yini ongayenza ukunikeza intombazane usuku lokuzalwa
Eau de toilette "Acqua di Gio" kusukela "Armani": Ukubukeza
Ukugeza ubumba: ukubuyekezwa kanye Imiphumela ngezithombe
Isicisha-mlilo DU-5: injongo, izici zohlelo lokusebenza, Ukucaciswa